"Poverty as a Marketing Opportunity, Fa tsy Social Olana" (2)
"Ny fahantrana toy ny Marketing Opportunity, Tsy Olana ara-tsosialy " (2)
Lohahevitra:Fahantrana toy ny Marketing Opportunity
Posted by: Anie Anokuru Desambra 22, 2013
Inona no baffles ahy indraindray no tsy mazava ny olona liana, amin'ny raharaham-barotra na dia nandinika hinged amin'ny fahantrana modely ho nanatona-barotra toy ny fahafahana, fa tsy ny olana ara-tsosialy be touted. Ambany ny Piramida (BoP), ho toy ny foto-kevitra, Ahariharin'ny Manaiky hiray 'ny pointer' ny fomba manasongadina barotra talaky amin'ny olana ara-tsosialy dousing fahantrana izay mitana ny tena manan-danja. Manontany tena aho hoe firy ny orinasa vaovao mifandray modely (izay efa lasa 'in-zavatra' any an-kafa) Azo nosoratan'i Nizeria ankehitriny. Izaho tsy mba mahalala na inona na inona.
Amin'ny toe-javatra izay misy ny tena sy ny ezaka tapa-kevitra amin'ny famoronana fahafahana avy amin'ny fahantrana, dia tsy fandrosoana teknolojia fanavaozana izay ilaina mba hiditra tsena izay mifototra amin'ny asa ny mahantra. Fa, boky tantara dia barotra fomba izay mamerina-manodidina olana ara-tsosialy, mamela ny orinasa mba ho fanatsarana ny vola raha olona 'fiainany sy manampy azy ireo hitsangana amin'ny fahantrana.
C.K. Prahalad sy ny hafa dia manana azy fa ny mahantra ahitana ny 'mahay mitraka ary famoronana mpandraharaha', 'Lanjany-mahatsiaro tena mpanjifa', raha 'izao tontolo izao manontolo ny fahafahana' miakatra ho an'ny ny mahantra sy ny mifandray initiators-barotra. Amin'ny maha-barotra mitovy dika amin'ny raharaham-barotra sy ny fomba izany manana mitondra amin'ny tsena ho an'ny mahantra - ahitana orinasa modely izay soa mety initiators (e.g. orinasa amin'ny firenena samihafa, orinasa kely sehatra tsy miankina) ary ny mahantra (izay mampiseho amin'ny roa ny famokarana sy ny fanjifàna ny lamina) - Izany dia mahatonga ny mora nilaza fa ny fahantrana fahafahana miteraka-barotra, fa tsy fikatsahana be olana ara-tsosialy.
Fantatra ny tsara "4 Sal ny Marketing" ihany koa ny orinasa mihatra mikendry ny manamaivana ny fahantrana amin'ny fomba ireo:
Product - Inona no ho omena ny fifanakalozana ara-bola, ao izany raharaha izany amin'ny fifandraisana amin'ireo Tier faha-4 ny piramida, dia entana, asa na ny teknolojia eo amin'ny teboka-of-fampiasana ny rafitra famatsian-drano; salama sakafo; micro-bola na ambany-vidiny rafitra remittance; trano; sy ny heriny (eny-Grid fahefana famatsiana).
Price - Inona izany vidiny, amin'ny vola sy ny tena teny. Tsy fahazakana ny vidin-javatra mifandray amin'ny kalitao mihatra eto (BoP mpanjifa ihany koa ny toetra mendrika ny tsara indrindra). Inona no miasa ao amin'ny tsena ity dia ny entana ny entana ao amin'ny vondrona kely dia kely (e.g. tanàna kely iray nivarotra sigara antsinjarany fivarotana ny ampahany, ny vovon-tsavony ny 'sachet', sy misotro amin'ny kapoaka ny fitaratra na).
Place - Aiza ny vokatra azo nividy teo an-tsena izany no mahatonga ny anjara ny mpivarotra indraindray, amin'ny fantsona famatsiana tsara izay mitaky soa sisiny mba hanohana ny tenany sy ny fahombiazana. Ankamaroan'ny fotoana, mpivarotra manome asa fanampiny ho an'ny mpanjifa (e.g. taorian'ny asa fanompoana varotra, ary na dia fanomezana ny voninahitra ho an'ireo mpanjifa, tamin'ireo olona tao amin'ny tanàna dia matetika Fantatsika tsara).
Promotion - Products ho an'ny tsena BoP mitaky fisondrotana hentitra mba hahatonga azy ireo ho fantatra, tao anatin 'ny lahateny fantsona izay afaka manome azy ireo profitably. Maharitra ary lava indraindray fampiroboroboana no nangatahana matetika noho ny toetra nentin-drazana ny tsena ho an'ny mahantra. Rural mpanjifa, ny ankamaroan'ny fotoana, mila mahita izay te-hividy, sy ny fomba fiasan'izy. Izany no antony iray tena lehibe mampiseho fihetsiketsehana fitaovana ho an'ny fampandrosoana any BoP-barotra.
I famandrihana ny "Business hiady amin'ny fahantrana", vondrom-piarahamonina an-tserasera ny olona avy amin'ny raharaham-barotra, mpamatsy vola iraisam-pirenena, Fikambanana tsy miankina, ary ny oniversite, izay mizara fitiavana ny fahantrana amin'ny alalan'ny raharaham-barotra ady. Amin'ny maha-Nizeriana, dia toa aho 'mitokantokana' any. Izaho mihevitra ny tsy-luster fironana ny mpandray anjara manan-danja ao Nizeria swaying mazava tsara ny olona fa tsy misy dikany vitsivitsy iray ny mpiray tanindrazana hitodika any amin'ny fitarihan'ny sehatra io, izay manampy mba hampirisihana hevitra mikasika ny fomba sasany ny 112 tapitrisa no mahantra Nizeriana farany nanao veloma ny fahantrana.
Foibem-pikarohana, akademika andrim-panjakana, ary barotra climes maro hafa tsy tapaka avy BoP churning famoronana sy ny raharaham-barotra mifandraika modely. Tena mahagaga ny antony toa tanteraka Nizeria Voaro amin'ny alehany-on. Ny tsy fahampiam-toerana eto ihany no manome ny ohatra ny raharaham-barotra ireo modely (avy ny 150 Aho afaka mampiasa), ary miantso ny valiny nahoana no tsy misy ezaka toy izany dia ho replicated ao Nizeria:
– Zanabolana (GPS) teknolojia niasa ny vehivavy eo amin'ny fiaraha-monina jono, mba hanamora ny vadiny 'ezaka asa any amin'ny Oseana Indianina (Sri Lanka).
-Unilever ny orinasa ho an'ny vehivavy any ambanivohitra mahantra, amin'ny alalan'ny retailing ny fahasalamana sy ny fahadiovana vokatra (India).
-Vodafone ny fampidirana ny finday banky vahaolana, M-PESA (Kenya, Tanzania).
– Natura ny fampiasana ny "Priprioca" ala zavamaniry hanitra noho ny 'Ekos' makiazy tsipika (Brezila).
-Barclays Bank ho eo an-toerana ny mba hampahahendry "Susu" microfinance fotoam-pivavahana avy angona nentim-paharazana (Ghana).
– Treadle paompy ho an'ny tantsaha madinika 'ny fandraisana anjara amin'ny fambolena nitombo vidy rojo ho an'ny vola miditra (Bangladesy, India sy Nepal).
– Holcim ny 'House-ny-fiainana' ny fanomezana modely simenitra mba hiatrehana ny trano ny tena ilain'ny mahantra (Sri Lanka).
– Ny eny ambanivohitra Amanz'abantu rano amin'ny alalan'ny karatra mahay teknolojia (South Africa).
– Dimitar Madzarov procurement ronono rafitra ho an'ny sehatra tantsaha madinika mpamatsy (Bulgaria).
– Bosch, Siemens sy Hausgerate (Boa) cooker, atosiky ny menaka voanio (Indonezia).
– INENSUS 'turbines rivotra kely sy ny hery Décentralisées rafitra (Maoritania).
– Ceramic filtration rano ny rafitra (Nicaragua).
– Mpiompy 'omby Tracking, fampiasana finday sy fitaovana zanabolana (Senegal).
– Shoprite ny fanohanana ny tantsaha mpamokatra madinika madio voankazo sy legioma (Mozambika).
– DANONE ny famokarana sy ny varotra yoghurt tetika (ny ankizy fampandrosoana), mampiasa tambajotra voalamina tsara ny vehivavy any ambanivohitra, "Grameen Ladies"(Bangladesy).
Ny ambony rehetra fantatra fa nitondra an-tapitrisany avy amin'ny fahantrana, ary efa tokony homarinana avy amin'ny zava-baovao raharaha modely izay anjara asa lehibe nilalao-barotra. Izay mety ho milaza ny fahantrana-barotra ahitana ny fahafahana, fa tsy olana ara-tsosialy tsara dikany.
"Ny fahantrana toy ny Marketing Opportunity, Tsy Olana ara-tsosialy "
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny ""Ny fahantrana toy ny Marketing Opportunity, Tsy Olana ara-tsosialy " (2)"